Iyini ingcindezi yasemkhathini futhi isebenza kanjani? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iyini ingcindezi yasemkhathini futhi isebenza kanjani?
IsiJalimane Portillo | | Ciencia, Izinsimbi Zomkhathi, Isimo sezulu
Esimweni sezulu, ingcindezi yasemkhathini Kuyinto ebaluleke kakhulu okufanele uyicabangele lapho ubikezela futhi ufunda ngokuziphatha kwesimo sezulu. Amafu, izivunguvungu, izivunguvungu, imimoya, njll. Ngokuyinhloko kulungiswa izinguquko ekucindezelekeni komkhathi.
Kodwa-ke, ingcindezi yasemkhathini akuyona into ephathekayo, into engabonakala ngeso lenyama, ngakho-ke kunabantu abaningi abawuqondayo umqondo, kepha abazi ngempela ukuthi uyini.
1 Yini ingcindezi yasemkhathini?
2 Ingcindezi yasemkhathini ilinganiswa kumaphi amayunithi?
3 Kalwa kanjani ingcindezi yasemkhathini?
4 Ingcindezi yasemkhathini nokuphakama
4.1 Iyini ingcindezi olwandle?
5 Ingcindezi yasemkhathini iwuthinta kanjani umzimba wethu?
6 Ingcindezi kanye nokungazinzi komkhathi noma ukuzinza
7 Ukuzinza noma i-Anticyclone
8 Isiphepho noma i-squall
9 Amamephu wesimo sezulu nesimo sezulu
10 Izimpi ezibandayo
11 Imikhawulo efudumele
Yini ingcindezi yasemkhathini?
Noma ngabe kubonakala ngathi cha umoya uyasinda. Asisazi isisindo somoya kwazise sicwile kuwo. Umoya unikeza ukumelana lapho sihamba, sigijima noma sigibela imoto, ngoba, njengamanzi, iyindlela esihamba ngayo. Ubuningi bamanzi buphakeme kakhulu kunobo bomoya, yingakho kunzima kakhulu kithi ukuhamba emanzini.
Ngandlela thile, umoya unamandla kithi nakukho konke. Ngakho-ke, Singachaza ingcindezi yasemkhathini njengamandla akhiqizwa umoya osemkhathini ebusweni bomhlaba. Ukuphakama kobuso bomhlaba ngokuqhathaniswa nolwandle, kwehlisa umfutho womoya.
Ingcindezi yasemkhathini ilinganiswa kumaphi amayunithi?
Kunengqondo ukucabanga ukuthi uma ingcindezi yasemkhathini ingenxa yesisindo somoya ngaphezu kwephuzu elithile ebusweni bomhlaba, kufanele sicabange ukuthi iphuzu liphakeme, ingcindezi izoba phansi, ngoba inani lomoya iyunithi ngayinye nalo lincane. ngenhla. Ingcindezi yasemkhathini ilinganiswa njengejubane, isisindo, njll. Kukalwa ngo- ama-atmospheres, ama-millibars, noma i-mm Hg (millimeters of mercury). Imvamisa ingcindezi yasemkhathini ekhona olwandle ithathwa njengereferensi. Lapho kuthatha inani lomkhathi o-1, ama-millibars ayi-1013 noma u-760 mm Hg kanti ilitha lomoya linesisindo esingu-1,293 amagremu. Iyunithi esetshenziswa kakhulu yizazi zezulu yilelo lama-millibars.
Kalwa kanjani ingcindezi yasemkhathini?
Ukuze ulinganise ukucindezela koketshezi, izikali zokucindezela. Isetshenziswa kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa i-tube manometer evulekile. Ngokuyinhloko ithubhu elimise okwe-U eliqukethe uketshezi. Umkhawulo owodwa webhubhu usecindezelweni lokukalwa kanti elinye lixhumana nomoya.
para Linganisa umoya noma ingcindezi yasemkhathini usebenzisa ama-barometers. Kukhona ama-barometers ezinhlobo ezahlukahlukene. Okwaziwa kakhulu yi- i-barometer ye-mercury eyasungulwa nguTorricelli. Yiphubhu emise okwangu-U enamagatsha avaliwe lapho kudonswe khona i-vacuum, ukuze ingcindezi engxenyeni ephezulu kakhulu yaleli gatsha ibe zero. Ngale ndlela, amandla akhishwa emoyeni kukholamu eliketshezi angalinganiswa nengcindezi yasemkhathini ikalwe.
Njengoba sishilo ngaphambili, ingcindezi yasemkhathini ingenxa yesisindo somoya phezu kwephuzu elithile lobuso bomhlaba, ngakho-ke, leli phuzu liphakeme, ingcindezi iphansi, ngoba kuncane inani lomoya okhona. Singasho ukuthi umfutho womoya uncipha phezulu. Isibonelo, entabeni intengo yomoya engxenyeni ephezulu incane kunaleyo ebhishi, ngenxa yokwehluka kobude.
Esinye isibonelo esithe xaxa yilokhu okulandelayo:
Izinga lolwandle lithathwa njengereferensi, lapho ingcindezi yasemkhathini inamanani ayi-760 mm Hg. Ukubheka ukuthi ingcindezi yasemkhathini iyancipha yini ukuphakama, siya entabeni enesiqongo esiphakeme cishe ngamamitha ayi-1.500 635 ngaphezu kogu lolwandle. Senza isilinganiso futhi kuvela ukuthi kulokho kuphakama, ingcindezi yasemkhathini ingu-XNUMX mm Hg. Ngalesi sivivinyo esincane, sibheka ukuthi inani lomoya esiqongweni sentaba lingaphansi kwalelo lolwandle futhi, ngakho-ke, amandla akhishwa umoya ebusweni kanye nathi mancane.
Ingcindezi yasemkhathini nokuphakama
Iphuzu elibalulekile okufanele ligcinwe engqondweni ukuthi ingcindezi yasemkhathini ayinciphisi ngokulingana ngobude ngoba umoya uwuketshezi olungacindezelwa kakhulu. Lokhu kuchaza ukuthi umoya osondelene nengaphezulu yomhlaba ucindezelwe isisindo somoya uqobo. Okungukuthi, izingqimba zokuqala zomoya eziseduze nomhlabathi iqukethe umoya omningi ucindezelwe umoya ophezulu (umoya ebusweni mkhulu, ngoba kunomoya omningi ngeyunithi yevolumu ngayinye), ngakho-ke ingcindezi iphezulu ebusweni futhi ayinciphi ngokulingana kusukela inani le Umoya awunciphi ngokuqinile ekuphakameni.
Ngale ndlela singasho ukuthi ukusondelana nolwandle, okwenza ukukhuphuka okuncane ukuphakama kubangele ukwehla okukhulu kwengcindezi, ngenkathi sikhuphuka, sidinga ukuya phezulu kakhulu ukuzwa ukwehla kwengcindezi yasemkhathini ngezinga elifanayo.
Ubuningi bomoya ekuphakameni
Iyini ingcindezi olwandle?
Ingcindezi yasemkhathini olwandle 760 mm Hg, elingana namamiligibhu ayi-1013. Ukuphakama kokuphakama, ingcindezi yehla; empeleni yehliswa ngo-1mb kuyo yonke imitha esikhuphuka ngayo.
Ingcindezi yasemkhathini iwuthinta kanjani umzimba wethu?
Imvamisa kuba nezinguquko ekucindezelekeni komkhathi lapho kunezivunguvungu, ukungazinzi komkhathi noma imimoya enamandla. Ukukhuphuka ukuphakama kuthinta nomzimba. Izintaba ngabantu abahlupheka kakhulu kulezi zinhlobo zezimpawu ngenxa yezinguquko kwingcindezi njengoba bekhuphuka izintaba.
Izimpawu ezivame kakhulu yilezi ikhanda, izimpawu zesisu, ubuthakathaka noma ukukhathala, ukungahlali noma isiyezi, ukuphazamiseka kokulala, phakathi kwabanye. Isilinganiso esisebenza kahle kunazo zonke ngokumelene nokuvela kwezimpawu zokugula ezintabeni ukwehla kuya ezindaweni eziphansi, noma ngabe kungamamitha nje ambalwa.
Abagibeli bezintaba abaningi baphathwa yikhanda lapho bekhuphuka kakhulu.
Ingcindezi kanye nokungazinzi komkhathi noma ukuzinza
Umoya unamandla ashukumisayo alula futhi uhlobene nobuningi bawo nokushisa kwawo. Umoya ofudumele awuminyene kakhulu futhi umoya obandayo uyajiya. Yingakho uma umoya ubanda kakhulu uvama ukwehla phezulu futhi okuphambene lapho kufudumele. Le mpilo yomoya idala ushintsho kwingcindezi yasemkhathini ebangela ukungazinzi noma ukuzinza emvelweni.
Ukuzinza noma i-Anticyclone
Lapho umoya ubanda futhi wehla, umfutho womoya uyanda ngoba kunomoya omningi ngaphezulu ngakho-ke, unamandla amakhulu. Lokhu kubangela ukuzinza komkhathi noma okubizwa nangokuthi i-anticyclone. Isimo se anticyclone Kubonakala ngokuba yindawo enokuthula, ngaphandle kwemimoya ngoba umoya obanda kakhulu futhi osinda kakhulu wehla kancane ujikeleze ngendlela eyisiyingi. Umoya ujika cishe ngokungacaci iwashi enyakatho Nenkabazwe nangakwesobunxele ohlangothini lwaseningizimu.
I-anticyclone emephini yengcindezi yasemkhathini
Isiphepho noma i-squall
Ngokuphambene nalokho, lapho umoya oshisayo ukhuphuka, wehlisa ingcindezi yasemkhathini futhi ubangele ukungazinzi. Ibizwa isiphepho noma isiphepho. Umoya uhlala uhamba ngokuya ngokukhetha kulezo zindawo ezinengcindezi ephansi yomkhathi. Lokho wukuthi, noma nini lapho indawo inesiphepho, umoya uzoba mkhulu, ngoba ekubeni yindawo yengcindezi encane, umoya uzoya lapho.
I-squall emephini yengcindezi yasemkhathini
Okunye okumele ukukhumbule ukuthi umoya obandayo nomoya oshisayo awuxubeki ngokushesha ngenxa yobuningi bawo. Lapho lezi zingaphezulu, umoya obandayo uphushela umoya oshisayo phezulu obangela ukwehla kwezingcindezi nokungazinzi. Kwabe sekwakhiwa isiphepho lapho kubizwa khona indawo yokuxhumana phakathi komoya oshisayo nobandayo ngaphambili.
Amamephu wesimo sezulu nesimo sezulu
I-Los amamephu wesimo sezulu zenziwa yizazi zezulu. Ukwenza lokhu, basebenzisa imininingwane abayiqoqayo eziteshini zezulu, ezindizeni, kumabhaluni azwakalayo nakuma-satellite okwenziwa ngawo. Amamephu akhiqizwayo amele izimo zomkhathi emazweni ahlukahlukene nezindawo ezifundwe. Amanani ezinye zezimo zezulu ezifana nengcindezi, umoya, imvula, njll.
Amamephu wesimo sezulu asithakazelisayo ngalesi sikhathi yilawo asikhombisa ingcindezi yasemkhathini. Kumephu yengcindezi imigqa yengcindezi elinganayo yomkhathi ibizwa ngokuthi ama-isobars. Okusho ukuthi, njengoba ingcindezi yasemkhathini iguquka, imigqa eminingi ye-isobar izovela ebalazweni. Izinqe ziyabonakala nasemabalazweni okucindezela. Ngenxa yalezi zinhlobo zamamephu kungenzeka ukunquma ukuthi isimo sezulu sinjani nokuthi sizoguquka kanjani emahoreni ambalwa alandelayo ngezinga eliphakeme kakhulu lokuthembeka, kuze kufike kumkhawulo wezinsuku ezintathu.
Kula mabalazwe, izindawo ezinengcindezi ephezulu kakhulu yomkhathi zibonisa isimo se-anticyclone kanti nezindawo ezinengcindezi encane zikhombisa iziphepho. Imikhawulo eshisayo nebandayo inqunywa yizimpawu futhi ibikezela isimo esizoba naso usuku lonke.
I-Los izingqimba ezibandayo yilezo okukhona kuzo umoya obandayo ushintsha umoya oshisayo. Zinamandla futhi zingadala ukuphazamiseka emkhathini njengokuduma kwezulu, imvula, iziphepho, imimoya enamandla, kanye neziphepho zeqhwa ezimfushane ngaphambi kokuba kudlule umphambili obandayo, kuhambisana nezimo ezomile njengoba phambili kuyaphambili. Ngokuya ngesikhathi sonyaka nendawo yayo, izingqimba ezibandayo zingalandelana izinsuku ezi-5 kuye kwezi-7.
I-Los izingalo ezifudumele yilezo okukhona kuzo inqwaba yomoya ofudumele kancane kancane ingena esikhundleni somoya obandayo. Ngokuvamile, ngokuhamba kobuso obufudumele, izinga lokushisa nomswakama kuyanda, ingcindezi yehla futhi yize umoya ushintsha, awudalulwa njengalapho kudlula umphambili obandayo. Imvula ngesimo semvula, iqhwa noma imvula ngokuvamile itholakala ekuqaleni kobuso bendawo, kanye nezimvula ezihamba phambili neziphepho.
Ngalezi zici eziyisisekelo zesimo sezulu, usungakwazi kahle ukuthi yini ingcindezi yasemkhathini nokuthi isebenza kanjani emhlabeni wethu. Ukuze wazi kahle ukuthi izazi zezulu zisitshelani ekubikezeleni isimo sezulu futhi sikwazi ukuhlaziya nokuqonda umkhathi wethu ngokwengeziwe.
Thola konke mayelana ne-barometer, ithuluzi elinganiswa ngayo ingcindezi yasemkhathini:
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Iyini ingcindezi yasemkhathini futhi isebenza kanjani?
URodolfo Gabriel David kusho
kwenza iminyaka 3
Yikuphi ukucindezela okukhona ekuphakameni lapho izindiza zezentengiselwano zihamba khona?
Ingabe ikhona noma ngabe uyayazi igrafu ekhombisa ukwehluka kwengcindezi ukusuka olwandle ukuya ekuphumeni komkhathi?
Phendula uRodolfo Gabriel David
USawule leyva kusho
Indatshana enhle kakhulu. Siyakuhalalisela. Ngiphendula umbuzo wami.
Phendula uSawule Leyva
Yenzeka kanjani i-tsunami
Ikhambi lokushisa komhlaba: igciwane elidla i-methane